troubleshooting check valve - တရုတ်လိုပဲ Valve (Tianjin)
BS 5163 ဂိတ်အဆို့ရှင်
F4 ဂိတ်အဆို့ရှင် Din
F5 ဂိတ်အဆို့ရှင် Din
AWWA / ANSI ဂိတ်အဆို့ရှင်
filter / ရေစစ်အောင်
အပူထိန်းကိရိယာ / အဆို့ရှင်အာရုံခံကိရိယာ
လုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Check, ဒီဆောင်းပါး, ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံကိုအင်ဂျင်နီယာများ၏နှစ်ပေါင်းများစွာ၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါသည်ဘုံအမှားဗဟိုမှအဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအဆို့ရှင်၏ရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်။ သံမဏိဝက်အူငါ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုကိုးကားထားပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
troubleshooting စစ်ဆေးမှုများဖြစ်ကြသည်: 1 disc ကိုချိုး;2အလတ်စားကျော ...
တစ်ခုဖြစ်သည်ကျိုးအဆို့ရှင်စေပါဘူး: အဆို့ရှင်အလတ်စားဖိအားထိန်းညှိဖို့နီးစပ်ပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြစ်ပါတယ်မီနှင့်အပြီး, "see-လွှ" ပြည်နယ်, ထိုအဆို့ရှင်ထိုင်ခုံမကြာခဏလုပ်ပေးရိုက်နှက်, (ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုသွန်းသံ, ကြေးဝါ, ကဲ့သို့) အချို့သောကြွပ်ဆတ်ပစ္စည်းများလုပ် အဆို့ရှင်ပြေးကျိုးခဲ့သည်။ သံမဏိပိုက်လိုင်းစုပ်စက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးချဉ်းကပ် non-ပြန်လာဆို့ရှင်ပြေးခိုင်မာခြင်းကိုအသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာ reflux ဖြစ်ပေါ်စေသည်: 1 တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု;2တည်ရှိနေပေမယ့်အညစ်အကြေး။ ပြုပြင်ရေးမျက်နှာပြင်ပိတျထားသောနှင့် backflow တားဆီးနိုငျသညျ, အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
non-ပြန်လာဆို့ရှင်ဘုံမကောင်းရင်နှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများမှလေးစားမှုနှင့်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တစ်ခုသာလှုံ့ဆော်ကစားနိုင်, လက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုမှု, ဖြစ်ပေါ်ဆို့ရှင်ပျက်ကွက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့တက်ကြွတဲ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်, အခြားအောင်မြင်မှုများကြုံတွေ့ရမည်, အခြေခံအကျဆုံးတဦးတည်းက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီး, ပစ္စည်းများ နှင့်စစ်ဆင်ရေးနိယာမ။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-10-2018
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Save လုပ်နည်း Valve Check?
အဘယ်သူမျှမ Clamp ကော်နက်ရှင်ရှိ Check?
valve ရွေးချယ်ရေး Techniques
ရေ Hammer check valve